(Magaca): Muwadin Somali oo xalay lagu dilay dalka Australia. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(Magaca): Muwadin Somali oo xalay lagu dilay dalka Australia.
On Apr 21, 2016 Last updated Apr 21, 2016
Muwaadin Somali oo Dareewal Taksi ka ahaa dalka Australia ayaa la sheegay in xalay la dilay, xilli uu ku sii jeeday Hoygiisa oo ku yaalla Deegaanka Fizroy oo 2 KM dhanka W/bari kaga toosan magaalladda Melbourne ee Gobalka Victoria ee dalkaasi.
Marxuumkaasi oo 31 jir ahaa ayaa la sheegay in Tooreey looga dhuftay qaarka sare ee Jirkiisa, xilli uu sii geli lahaa Dhismaha uu la deganaa Waalidkiisa.
Saraakiisha Boliska ee Saldhigga Fitzroy Police Station ayaa sheegay in lagu dadaalay sidii loo badbaadin lahaa Dareewalkaasi, balse uu isla goobtii uu ku naf baxay abaarihii 11:30 Fiidnimo ee Xalay.
Warkan oo aan ka soo daalacanay Shabakadda Wararka ee 9news.com.au ee dalka Australia ayaa qortay inay Labo Goobjooge sheegeen inay arkayeen Nin dheer oo labisan dhar madow, isla markaana watay Boorsadda Garabka oo ka sii cararayey goobta uu dilku ka dhacay.
Marxuumka oo la oran jirey Maxamuud Xuseen, balse lagu naanaysi jirey Maxamuud Mukhtaar ayaa la sheegay inuu dhulka ku dhacay isla markii la dooxay, waxayna Boliska maydka dhinaciisa ka heleen Mobaylkiisa iyo Suunkiisa, mana kala cadda in wax laga dhacay iyo in kale.
Baarayaasha Boliska Australia waxay sheegeen inay baari doonaan dhacdadaasi, isla markaana qiimeyn doonaan Muuqaalka ay duubeen Kaamerooyinka Dahsoon ee CCTV ee ku rakiban Deegaanka xalay lagu dilay Muwaadinka Soomaaliga.
Taksiile kale oo saaxiib la ah Marxuumka geeriyooday oo lagu magacaabo Cabdulle Botaan ayaa u sheegay Suxufiyiinta inay Jaalliyadda Soomaaliyeed waqti murugo u tahay dilka Marxuumkaasi oo uu sheegay inuu ahaa Nin fiican oo aan marna dad kale dhibaataynin.
Agaasimaha Fulinta ee Ururka Taksiilayaasha Gobalka Victoria, David Samuel waxa uu tacsi u diray qoyska uu ka baxay Marxuumkaasi oo uu tilmaamay in ahaa Dareewal u adeega Dadweynaha, gaar ahaan xilliyadda dambe.
War-Saxaafadeed: Xukuumadda oo sheegtay inay sameynayaan unug dabagala xogaha shabakadaha wax Tahriibiya
UNHCR oo xaqiijisay inay 500 Tahriibayaal u badan Somali ku geeriyoodeen dooni ku degtay Badda Mediterraneanka.